Apple Podcasts dia tsy tsara araka ny tian'ny orinasa hinoantsika | Avy amin'ny mac aho
Fantatrao ve fa Apple dia manana fampiharana manokana hihainoana Podcast?. Fantatrao angamba izany ary angamba raha anisan'ireo mihaino an'ity karazana fialamboly aural ity ianao dia aza mampiasa ny fampiharana Apple. Ny hevitra momba izany dia ambany foana. Hany ka tsy maintsy nanavao azy sy nanatsara ny orinasa, saingy mbola tsy manana hevitra tsara momba izany ny mpampiasa. Na izany aza, nandritra ny iray volana latsaka, dia toa niova ny hevitra, fa aza diso, tsy nihatsara ny app.
Rehefa misintona fampiharana avy amin'ny App Store ianao dia azonao atao ny manome naoty izany, mahazo isa hatramin'ny kintana dimy (avy amin'ny iray) ary mamela fanehoan-kevitra. Manampy ny mpamorona hanatsara ny fampiharana mihitsy izany na manondro fa eo amin'ny lalana marina izy ireo. Saingy ilaina ihany koa ho an'ireo mpampiasa izay mitady fampiharana mitovy amin'izany ary tarihin'ny hevitry ny hafa. Nanana kintana 1.8 ny fampiharana Podcast an'ny Apple. Tsy tsara mihitsy. Na izany aza, nandritra ny iray volana latsaka, dia nahazo naoty 4.6 kintana. Tsy izay ihany anefa, Niala tamin'ny fananana hevitra 1000 teo ho eo izy io ka lasa nanana 18.000 XNUMX mahery. Nahoana?
Ny antony dia satria rehefa mihaino Podcast amin'ny alalan'ity fampiharana ity ny mpampiasa iray, dia mahazo fampitandremana izy ireo hanombana ny zavatra reny. Mazava ho azy fa saika vato tsara foana izy ireo satria ny mpampiasa no nisafidy izay hohenoina. Raha tiako ny Mpanjakavavy ka misafidy ny Mpanjakavavy, dia ho ankafiziko tsara ny zavatra henoko, satria mitranga izany. Ireo fanombanana ireo dia toa aseho amin'ny fanombanana ny fampiharana. Ka mety tsy nahy na an-tsitrapo, tsy fantatra, ny orinasa amerikana dia mampisondrotra ny tombam-bidin'ny fampiharana iray izay mamela be dia be ny faniriana.
Toa tsy mitranga izany rehefa mampiasa fampiharana hafa hihainoana Podcast. Tena hafahafa daholo, sa tsy izany?
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Avy amin'ny mac aho » Programa Mac » Mac App Store » Apple Podcasts dia tsy tsara araka ny tian'ny orinasa hinoantsika
Nahazo orinasa laharana voalohany indray i Apple
Ny fanadihadiana The Line dia nandiso fanantenana tamin'ny voalohany noho ny tsy fanaovana risika